အွန်စောတို့ဌာနေ: Construction of Asia's Tallest Building Starts
The construction of the world's second tallest building starts in Seoul on Friday. The ground-breaking ceremony for the 133-story skyscraper tentatively called the DMC Landmark Tower will be held at Digital Media City in Sangam-dong, northwestern Seoul. Construction is to be completed in 2015.
The Chosun Ilbo မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by Korea-Myanmar Mutual Benefit at 10:43 AM
အဲဒါကြီးပီးမှပဲ လာလည်တော့မယ် အွန်စောရေ.
အင် အဲလိုလား အဲဒါကြီးပြီးမှဆိုလိုသေးတယ်ဗျ။ အဲဒီအချိန်လောက်ဆို အွန်စောတော့ အာမ မခံဘူးနော် ။ အိမ်ထောင်ရက်သားကြလို့ ကလေးတွေရနေလောက်ပြီ။ နောက်ကြသွားပြီလို့ နောင်တ မရနဲ့ပေါ့။ ဟဲ--ဟဲ---။